Iindaba - "Ukwandiswa" kwephakheji egcina umlilo izisa ukhuseleko oluphezulu kuthintelo lomlilo
Kwiminyaka yakutshanje, urhulumente uhlawule ngakumbi nangakumbi kuthintelo lomlilo lweeprojekthi zokwakha, kwaye inani elikhulu lezinto zokuthintela umlilo ziye zasetyenziswa kulwakhiwo lobunjineli. I-Db-a3-cd01 ibhegi egcina umlilo luhlobo olutsha lobungqina bomlilo obuxhasa ubungqina obenziwe yinkampani yakwa-Weicheng ngokwemigangatho emitsha kazwelonke ye-gb23864-2009 (izinto zokucima umlilo). Ubume be-db-a3-cd01 ibhegi egcina umlilo ifana nomqamelo omncinci, umaleko wangaphandle wenziwe ngelaphu elinyangiweyo leglasi, kwaye ngaphakathi kugcwele umxube wezinto ezingavakaliyo kunye nezongezo ezizodwa. Imveliso ayinabutyhefu, ayinambitheki, ayinamhlwa, ayimeli manzi, ayimeli ioyile, ayimelana neHygrothermal, iyangqinelana nomjikelo womkhenkce kunye neempawu ezilungileyo zokwandisa. Inokudityaniswa iphinde isetyenziswe kwakhona ngokuthanda kwayo. Inokwenziwa kwiimilo ezahlukeneyo ze-firewall kunye nocingo olungacimiyo ngokweemfuno ezahlukeneyo zabasebenzisi, kwaye inokusetyenziselwa ukufakela imingxunya efuna unyango lobungqina bomlilo. Xa udibana nomlilo, izinto ezikwiphakheji yokulinda umlilo ziyatshiswa kwaye zandiswe zenze ibhloko lobusi, lenze umaleko wokutywina oqinileyo ukufezekisa ukuthintela umlilo kunye nokugquma ubushushu, kunye nokulawula umlilo ngaphakathi kuluhlu lwasekhaya. Xa ubukhulu bokuxhoma bufikelela kwi-240mm, umda wokumelana nomlilo unokufikelela ngaphezulu kwe-180min.
Ixesha Post: Jul-13-2020